ILysá hora Rokytnice nad Jizerou Ski resort Horní Domky
ILysahora (Kahleberg ngesiJalimane) iyindawo ephakeme etholakala eCzech Ridge, eziNtabeni zaseGiant. Ukuphakama kwentaba ngamamitha ayi-1344. Indlela yethebula ivulwa kuphela ebusika. Ngokubonakala okuhle kakhulu iLysá Hora kanye nogquma lwezintaba zeGiant kungabonakala kusuka ePrague kusuka ebangeni elingamakhilomitha angama-1310.
Indawo ye-Horní Domky Ski itholakala eH Horní Rokytnice nad Jizerou emithambekeni eseningizimu yeLysá hora endaweni ephakeme ngamamitha angama-657 - 1.315 ngaphezu kwendawo yolwandle. Indawo yayo, imithambeka yezinsampula kanye nezinsizakalo kungaqhathaniswa nezindawo ezinhle kakhulu zokushibilika e-Czech Republic. Ithandwa ikakhulukazi ngokuhlukahluka okukhulu nobukhulu bezithambeka ze-ski, ezifinyelela kubude obuyi-13,5 km nasezindaweni ezibanzi kufinyelela ku-100m.
U-Horní Domky Mountains funicular funicular ukudutshulwa kwendiza Lysa hora Ukushushuluza Rokytnice skiareál ebusika
Amathegi: U-Horní Domky Mountains funicular funicular ukudutshulwa kwendiza Lysa hora Ukushushuluza Rokytnice skiareál ebusika